ngu UKarolina Klesta
Wonke amadolobha amakhulu has a umlando noma umnyuziyamu wesayensi owesabekayo ukugqekeza kwedolobha nezinsuku zemvula. Nokho, ezinye izindawo babe ngempela iminyuziyamu esiyingqayizivele ukuthi umane akufanele ezingabanjwanga. Abantu abasuka kuwo wonke umhlaba ukuze uvakashele H.R. Geiger Museum e Gruyere.
Fondue kuyinto omunye izitsha edume kakhulu oyophuma Switzerland, futhi lokhu akukho ngozi. Abantu bebelokhu kudla shizi encibilikisiwe lwebhodwe ohlanganyelwe amakhulu eminyaka engxenyeni esentshonalanga elikhuluma isiFulentshi yeSwitzerland. Nokho, ngabo-1930 Okhahlamba Ushizi Union ngobudlova akhangiswe lokhu dish kokubili kuzwelonke nasemhlabeni wonke, ukumemezela njengesidlo sikazwelonke saseSwitzerland njengendlela yokuthengisa ukugcwala kwezwe ushizi. Futhi siyajabula benza, ngubani ayithandi ushizi elicibilikile nesinkwa? Matanisa fondue yakho nge ezomile iwayini emhlophe, futhi uqiniseke ukuthi ungacwilisi kabili!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-experiences-switzerland-winter-summer%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#suisse #umabhebhana travelswitzerland
Ngihamba umhlaba nomyeni wami uPatrk nendodakazi yami uMia. Inhloso yami enkulu ukukhuthaza abanye ukuthi baphile impilo yabo ngokugcwele futhi bangayeki ukujaha amaphupho abo! - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte